Chii Chinonzi Account Offre & Nei Ndichifanira Kuva Neimwe?
Offshore Bank Account: Chii icho? Nei Uine Imwe?
Chinhu chokutanga kuziva kana uchifunga offshore banking ndeyekuti yakafanana nekubhangi pasi pemugwagwa. Unogona kutarisa account yako online. Iwe unogona kuendesa kubhengi waya kutumirwa mukati uye kunze kweakaunti yako. Mabhangi mazhinji ekumahombekombe ane makadhi ekubhengi ane chekuita neakaundi. Uye zvakare, makambani ekushandira ekunze anopa makadhi ekubhadhara eofficial ekubhadhara iwe yaunogona kubatanidza kune yako yakaundi account account.
Sezvaunoziva, account yemuno haina chikamu chidiki chemapepa mari yakarongedzwa mugomba re cubby rine zita rako pairi. Akaundi yako yebhangi ingori data yekombuta pane iyo bhengi network iyo inotsigirwa pamaseva pasi rese.
Kana iwe ukaenda kune imwe nyika kuzororo, iwe uchange uchinge uchikwanisa kuwana yako account, kubvisa mari, nezvimwewo, yako yekubhengi account mhiri kwemakungwa kune komputa kodhi pamwe yakatsigirwa pane chaiyo chaiyo yepasi rese komputa network seyako inoshamwaridzana bhangi bhangi.
Saka, hazvina basa kuti iwe unoisa bhangi pasi pakona kana kune rumwe rutivi rwepasi. Chero nzira, mari yako iri munzvimbo imwechete: pane yepasi rese komputa network.
Offshore Banking Kuchengetedza
Nezve kuchengetedzeka kwebhangi, ziva kuti pane zvimiro zvepasi rose zvemabhangi zvinofanirwa kusangana. Ndokunge, bhangi risati ragamuchira vanogadzika kubva kunze kwenyika rinofanira kupfuudza mimwe miedzo yekunetseka kwemari. Semuenzaniso, bhangi risati rasvika muBelize, Nevis, Cook Islands, Switzerland kana Cayman Islands rinokwanisa kutumira waya mumadhora eUS, inowanzoda kuwana bhangi rinoenderana neUS. Kuwana inonyorerana kubhengi kambani kunotakura zvimwe zvinodikanwa. Semuenzaniso, inofanirwa kuratidza kune iyo US institution kuti huwandu hwayo hwemasimba emari inoenderana nemitemo yakasimba yenyika. Uyezve, inofanira kuramba ichipfuura iyi bvunzo kuitira kuchengetedza hukama.
Pamusoro pezvo, kune yakasarudzika mitemo yehurumende mukati meimwe yeiyi kutonga. Chimwe chinhu chakaoma uye nekukurumidza chinodiwa ndechekuti mabhangi anofanirwa kuchengetedza mari yakakura kuitira kuchengetedza kuchengetedza depositor. Zvakare, vatongi vanoramba vachiongorora mabhengi. Izvi zvinobatsira kusimbisa kuti mabhanga anoramba ari mukutevedza uye kusimudzira mukurumbira weaya anozivikanwa nzvimbo dzemari. Iko kune zvinotambidzwa pane huwandu, huwandu uye chengetedzo inodiwa kune zvikwereti zvebhangi pamwe nekudyara. Pane zvinodiwa zvekota yekubika. Uyezve, vakuru vakuru vebhengi vanofanirwa kupfuura neyemashure cheki isati yawana mukana wekutungamira nesangano.
Standard & Mitemo
Iko kune yenyika dzakawanda kudzora maitiro emabhangi. Iyi ndiyo mitemo inofanirwa kuteerwa nemabhangi epasi rose kuitira kuti ipfuure mari kune dzimwe nyika. Izvi zvinosanganisira Basel III. Iyo Basel III chikamu chakarondedzerwa cheyero. Dare reBasel pamusoro peBhengi Supervision rakagadzira aya maitiro eindasitiri. Iro basa ndere kusimbisa uye kubatanidza mutemo, kutarisa uye njodzi manejimendi emabhangi indasitiri pasi rese. Chinangwa cheiyi chiyero kuita zvinotevera;
Kuvandudza kubhizimisi yebhangi yekukwanisa kupinza zvipembenene zvinokonzerwa nemari nemari yekushungurudzika, pasinei nokuti inobva kupi
Kuvandudza kushandiswa kwematambudziko, kushanda nekutarisira
Simbisa mabhenji 'pachena uye kubudiswa
Pane matanho epasi rese eLiquidity Coverage Ratio uye zvekutarisa njodzi matanho ayo mabhangi anofanirwa kuve nawo munzvimbo. Inoita izvi nekuita chokwadi chekuti banking institution ine huwandu hwakaringana hwepamusoro hwemhando yepamusoro yemidziyo yemagetsi (HQLA). Izvi ndizvo zvinhu bhangi zvinogona nyore uye nekukurumidza kushandura kuita mari. Iyo masosi inogona kubva yatendeukira kumisika yakasarudzika kuitira kuti isangane nezvayo zvinokodzera zve 30 khalendari-zuva retsi yekunetseka. Ikoko kune iyo yeNet Stable Funding Ratio zvinodiwa. Iyi mitero inoda mabhanga kuchengetedza yakachengeteka mari mbiri yeaviri pfupi uye yenguva refu.
Banking Offshore Inowanikwa
Offshore banking yakawanda zvikuru. Vanopfuura mamiriyoni e2.7 veUnited States vanonzi vane offshore accounts. Offshore banking haisi yeiyo yepamusoro 1%. Kubhengi kumahombekombe kunowanikwa kune chero munhu uye munhu wese anoda kutora mukana wezvakasiyana zvinobatsira. Mabhangi mazhinji ekunze anopa mabhiresi akaderera. Nekudaro, ivo vanogadzira sarudzo inonzwisisika kune chero munhu ane shungu yekuisa account yekumahombekombe.
Uyezve, zvakanakira kuva ne offshore bank account enda kunze kwemimwe nzira yekudyara uye kuviga zvinhu zvako. Izvi zvakanaka zvinobatsira munhu wepakati uye zvinogona kuvandudza kwazvo ruzivo rwemazuva ese rwebhangi. Panyaya yekuchengetedzeka, kuwanikwa, nyore, uye rugare rwepfungwa, zvinoita sekunge banki yemahombekombe ndiyo mhinduro kwayo. Hwakaenda mazuva ekufunga kwekunze kubhengi sevamwe vari kure, vane tarisiro yekubvisa mutero kuviga kubva kuhurumende yako yepamba. Kusiyana neizvozvo, zviri pamutemo, mutsika uye mutsika pazvinoitwa nemazvo. Zvakare, iyo chaiyo, inoshanda, uye inosarudzika sarudzo inowanikwa kune vese vanoda kutora mukana nazvo.
Nei Uchifanira Kudzidza Zvakawanda?
Vazhinji maAmerican havazive kuti banki yekune dzimwe nyika ndeyei chaizvo. Asi, o, ino ndiyo nguva yekutanga kudzidza chokwadi nezvazvo. Offshore banking iko kushandiswa kweiyo bhengi system mune imwe nyika yakasiyana neiya maunogara; zvakanyanya kunaka munzvimbo yakasimba, yakagadzikana. Kune zvakawanda zvakanaka zvemari uye zvepamutemo zvikwaniriso kubhengi mhiri. Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nehupfumi mune doldrums. Izvo zvinogona kunge zvichikonzerwa nehurombo re federal reservation system rakasungirirwa kuhurumende iri zvakanyanya muchikwereti, senge muUSA. Neimwe nzira, zvinogona kudaro, sekutadza kweWashington Mutual, mabhanga akakurumbira akakurisa miedzo yekushushikana.
Nekudaro, zvinoita sekunge kwakakosha kutanga kuongorora kubhengi rekune dzimwe nyika senzira iri pamutemo. NeAmerican uye mazhinji eEuropean emabhangi maitiro akawandisa, zvakanyanyisa, iwe ungangoda zvakare kutarisa kune izvi zvikonzero zvatichazokurukura pazasi.
Kubhengi kumhiri kwemhiri kunopa kusiyanisa kwemari pane yako mari. Izvi zvinobatsira kwazvo kuchengetedza yakachengeteka, yakagadzikana kwenguva yakareba yekudyara portfolio. Mabhangi mashoma kwazvo epamba anopa sarudzo dzekubata dzakasiyana siyana. Kubata pfuma mhiri kwemakungwa mune dzakasiyana dzemari kunotendera munhu kutora zvakanakana kusvetuka mukushanduka kwemari. Mushure mekushata kwe9 / 11, vanhu vazhinji vakavhura maakaundi ekuCanada emabhengi uye vakachinja madhora eUSA kumadhora eCanada. Vazhinji vakaita zvakanaka 30% purofiti seUS dollar dhangi uye weCanada mumwe wakasimbiswa. Nekudaro, kubata kwakasiyana-siyana mari kunogona kukonzeresa mari, kupa kudzoka kwakanyanya mune mamwe mamiriro emusika uye kuderera njodzi.
Iyo inobvumira kukwira kwakasiyana siyana kwemari. Izvo zvakakoshawo kufunga kuti apo US yaive mukuderera mu2008, musika weAsia waive wakawedzera. Kuganhurira bhizinesi rako remukati rinokutadzisa. Nekudaro, iwe ungade kukohwa izvo zvinobatsira zvehupfumi kuita zvakanaka nepo hupfumi hwako hwepamba hungave husiri. Muchokwadi, iwe unogona kufunga nezvekutanga inopfuura imwe account yekune imwe nyika. Nekudaro, iwe unogona kuzvivimbisa kuti uri kutora mukana uzere nemitemo yakavanzika yenyika yekune dzimwe nyika. MuSwitzerland, semuenzaniso, mabhangi ari zvakare mafemu ekutarisira mari. Kubhuroka kweSwitzerland kunouya nemamwe mamaneja epamusoro emari munyika. Nekudaro, akaronga zvemari muchinzvimbo anogona kupa zano portfolio inopa musanganiswa mukuru wekukura uye kuchengeteka. Iyo US inodzikamisa huwandu hwevatengesi umo mutengesi wezuva anogona kutora chikamu. Kutengeserana offshore kunobvisa cap iyi.
Kufarira Kufarira Mazano
Mabhangi eU.S. anowanzo kupa yakaderera kwazvo mari yemadhipoti. Semuenzaniso, pamisika iripo yemisika, kana iwe ukaisa $ 1,000 USD munaNdira, uchaita $ 10 kufarira chete pagore. Vamwe vanganzwa kugutsikana, kana kutonakidzwa, kuita chero mari pane yavo yekuchengetedza. Nekudaro, iwe kana uchienzanisa izvo kune mamwe mabhanga epasi rose, iwe unogona kuwana mamwe madhora akanyanya emari yemadhiza pamadhiza ako pamhenderekedzo. Tiri kutaura zvinokwana kufarira kuita kuti iwe ugadzire account inongowira pamusoro pebatsiro iri chete. Nzvimbo dzakaita seAustralia, Switzerland, Netherlands, neFrance dzinogona kwete kungopa hukuru hwemari pamadhidhiya ako, asi dzakanyorwawo seimba kune mamwe emadhizaini safest banks pasi rose.
Fambisa Mari Nokukurumidza
Pamwe chete nekusiyana kwezvinhu zvako, kuva nekodha rekodhi rekutsvaga kunoita kuti iwe uende nokukurumidza. Vabati vepa Offshore vane mukana wekufambisa mari yavo, kana zvichidikanwa. Semuenzaniso, iwe unogona kunge uri mune mamiriro ezvinhu apo kuchengetedzwa kwemidziyo kubva kumatare edzimhosva kwakave kudikanwa. Mukuwedzera, iwe unogona kunge uine nguva dzose kutengeserana pamabhizinesi epasi rese zviitiko. Ose maviri echokwadi aya akakosha pachawo.
Pamwe pamitsetse iyi, isu tinoziva zvakare kuti mabhangi epamba anowanzochengeta mari shoma shoma iripo yekubvisa yakakura kwazvo. Izvi zvinoita kuti zvinyanye kuoma kuwana nyore nyore mari yako yose nekukurumidza. Chinetso ndechekuti pano pane akawanda mamiriro ezvinhu apo rudzi urwu rwekuganhurira runogona kuuraya maererano nekuchengetedza zvinhu. Nei izvi zvichikosha? Heano chikonzero. Ko kana ukatadza kubvisa mari yako nekukurumidza? Ndokunge, iwe unogona kunge uine gweta mumutsara kumashure kwako uyo anoda kusunungura account yako kusvika iyo bhangi iriisa pamusoro.
Saka, kuve neaccount yekumhiri inosunga maoko emupikisi wako. Unogona kufambisa mari yako nekukasira uye / kana kuva nedhiri remahombekombe matanho ekuchengetedza.
Zvichida pane zvakajairika zvakajairika zvekunze kwebhishopu ndekuvanza zvinhu kubva kumunhu wemutero. Muzvokwadi, izvi hazvisi zvokwadi, sezvo mabhangi ekumahombekombe anowanzoita pachena kune zvinangwa zvemitero. Izvo zvataurwa, kune dzimwe nzira dzekuchengetedza zvisingabatsiri pachedu kana uchishandisa yeAustralia account. Chero ipi zvayo yekuAmerica inotamira $10,000 USD kana kupfuura, chero nguva, inofanira kuzvireva. Nekudaro, zvinokwanisika kuve neaccount ine pasi pe $ 10,000 USD usingataure nezvayo. Iwe unoita, zvisinei, iwe unofanirwa kutaurira kana iwe uri unasaina pane imwe nyika account. Nekudaro, isu tinokurudzira zvikuru kuti utaure newako mutengesi wezano.
Safest Banks Mabhizimisi
Nzvimbo yakachengeteka yakawanda yebhengi. Iyo federal reservation system iyo inotsigira US mabhangi, zvakare, inotsigirwa nenyika ine chikwereti chakazara kwazvo pasi pano. Zvakare, zvinyorwa zvepamusoro zvemari zvakaburitsa rondedzero dzemabhangi akachengeteka pasi rese; hapana kana imwe yaive mabhanga emuAmerica emunyika. Chaizvoizvo. Tora Global Finance Magazine, semuenzaniso, Vanoburitsa rondedzero yemabhangi akachengetedzeka e50 gore rega rega. Chinhu chinokatyamadza ndechekuti hachitauri chero hombe yebhanga reAmerica. Nezvekunyora uku, iwo chete mabhangi eAmerica pane "akachengeteka" runyorwa mabhangi matatu madiki ekurima, iwo anonyora munhamba 30, 45 uye 50.
Maererano neGlobal Fiance, nyika idzi dzine mabhangi akachengeteka:
Padzimwe nyika dziri pamusoro, Switzerland neLuxembourg chete ndiyo ichavhura maakaunti pasina kukosha kwekufamba nyika. Izvo zvishoma zvidhoma zvakaiswa. Anobhengi anozopedzisira auya kuzokushanyira iwe pachako.
Kunze kwenyika, zvakadaro, zviri nyore kuwana mabhangi mune akaderera zvikwereti nyika izvo zvisinga (uye hazvidi) kubhejera nemari yako. Nekuda kweizvozvo, ivo vanokwanisa kuchengeta imwe mari iripo kune zvaunobvisa. Kana iwe waisa maererano nenyaya yekudyara, iwe waizoda kupi kupaka mari yako? Mune kambani inoshambira mari? Kana mumwe anonyura muchikwereti? Nyika dzakaita seSwitzerland neLuxembourg dzine yakasimba kubhengi mirau. Ivo vanoisa "kutarisa uye zviyero" pane ese mabhengi maitiro ezvekuita. Mamwe mazhinji mazhinji emhiri kumahombekombe uye nyika ine mamwe maitiro. Masisitimu aya anobatsira kuona kuti vanhu vari kutarisa kubhengi kumhiri kwemakungwa vanogona kuzviita zvakachengeteka uye zvine mutsindo.
Pamusoro pezvo, nyanzvi zhinji dzekudzivirira zvinhu dzinoti, kana iwe uri mubhangi uchienda kumahombekombe, haunyararire kumatare edzimhosva. Kureva kuti, kana iwe ukasunga chunk yefuma yako mumaaccountal account ivo zvanetsa kuti mupikisi wako abate. Izvi zvinogona kunge zvisiri kunetsekana kune wese munhu; asi ramba uchifunga kuti zvakaomera mumwe munhu kuti asunungure maakaundi ako musango kana anga akagara mumabhanga ekunze. Kwekuchengetedza kwenguva refu, nyanzvi dzinokurudzira kubata account yako mukambani yekune dzimwe nyika uye / kana kuvimba. Kubata mari muzvishandiso izvi hakungopi zvakavanzika. Vanogona kupawo kuchengetedzwa kwakanyanya kwemutemo kana dare redzimhosva richida kudzoserwa mari yacho.
Kugadzira Account Offrere
Izvi hazvizomboshamisi. Izvo zviri kuramba zvichiwedzera kune kwakaoma kuti vanhu vekuAmerican kuseta maakaundi emahombekombe. Ruzivo urwu rwakanangana zvikuru. Saka, zvakakosha kubvunza nyanzvi ine ruzivo kuti uwane yakanakira bhangi kwauri. Iri ibasa rinopihwa nesangano redu. Isu tinoziva kuti ndeapi mabhangi anogamuchira vatengi vekunze. Isu tine shungu dzekuti mabhangi api atinonzwa kunge akasimba uye akachengetedzeka uye ayo anopa zvakanyanya kutaridzika masevhisi.
Zvimwe zvinhu zvokutsvaga:
Kuwanika kwevatengi veAmerica. Haasi mabhengi ese achiri kugamuchira vatengi veAmerica, Canadian uye European.
Kukwanisa kuvhura account kure. Kune mamwe mabhangi ekunze ane sarudzo dzevatengi kuvhura account online kana pafoni. Nomuzvarirwo, iwe zvakare unozofanirwa kupa zvinyorwa zviri pamutemo zvinodiwa-yako-mutengi zvinyorwa. Mamwe mabhanga anoda kuti ushanyire kubhengi rawo zvakananga kuvhura account. Izvo zvakati, mamwe emabhangi aya ane matavi epamba. Naizvozvo, vamwe vanokutendera iwe kumisikidza mhiri kwemakero account kuburikidza nebazi renzvimbo. Dambudziko nderekuti matare eUS ane hutongi pamusoro pematavi emuno. Saka zvakakosha kuti ushandise bhangi risina nzvimbo dzinoenderana neUS.
Low minimums. Mabhangi mazhinji anoda dhipositi rekuvhura account (iro rinoenda remumba uye rekunze). Saka iwe uchazoda kutsvaga bhanga rine shoma mukati mechikonzero iwe.
Mabhangi ane vatengi vemunharaunda pamwe nevatengi vekunze. Unogona kuzorora kuti bhangi rinopa mabasa kune veko rinozoongororwa zvakanaka. Bhanga rine chete vatengi vekunze, rinowanzo kudaidzwa kuti “Class B” bank. Aya mabhangi anogona kuve akanyanya kurerukirwa nevatongi. "Class A" mabhangi anowanzo gamuchira vese vari mukati uye vekunze vanoisa mari.
Mabhangi mazhinji ekunze ane mitemo yakasimba yekuvanzika uye haataure ruzivo rwe account. Kubika mutero, zvisinei, inyaya dzakasiyana. Masangano emari epasi rese anotungamira kunyorera mafomu kune vagari vemuUS uye vagari. Kuita izvi kunovabetsera kutevedzera mitemo yemutero yeUS. Basa racho rinorara zvakare neanobata account kuti ataure zvakanaka. Paunenge uchimisikidza iyo offshore account iwe uchadawo kuchengeta yepakati yemitero miripo. Izvo zvakakosha kuti uone, nenzira, izvi zvinorehwa kuve ruzivo runobatsira chete kwete zano remutero. Izvo zvinofanirwa kuchinja. Saka, tanga kutsvaga zano kubva kune munhu ane rezinesi accountant. Izvo zviri kutaurwa, zvinokurudzirwa kuti maAmerican vachengeta zvinotevera mupfungwa.
Iwe unofanirwa kuudza iyo yose yenyika yose. Izvi zvinoshanda kunyange kana iwe uchibhadhara mutero kune dzimwe nyika pamari yako. Kuchengeta mari kune uko uye kungobhadhara mitero apo iwe uchidzosa iyo yakaguma mu 1964. Makambani makuru ane nheyo huru yevashandi vanogona kubvisa izvi; asi kwete munhu wega kana sangano rakabatanidzwa.
Iwe unofanirwa kuudza chero imwe yebhengi yemari yekunze inopfuura $ 10,000 USD. Izvi zvinowedzererwa kune yako mari yekubika. Kana iwe uine account yekunyika inodarika zviuru gumi zvemadhora, iwe unofanirwa kufaira FBAR fomu.
Income Income. Kana iwe unofarira (mari, mari, kurasikirwa, kubviswa, kuwanikwa, uye kugoverwa) mune chero ipi zvayo yekunze yepamusoro yakadarika $ 50,000 USD pazuva rekupedzisira regore rokutere kana $ 75,000 USD chero nguva mukati megore, unofanira faira fomu 8928.
Chirango uye chido chekunyora zvisina kukodzera mitero yako. Iko hakuna mutemo wekugumira pakuteerera mutero. Zvirango zvinogona kubva pamadhora 10,000 kusvika mazana emazana emadhora. Kubvisa mutero, kutaura manyepo, uye kutadza kuudza zvinogona kutakura zvirango zvakaoma. Saka ita chokwadi chekuteerera nemitemo yese yemutero.
Kuita Sarudzo Yakanaka
Kunze kwezvose izvi, iwe unofanirwawo kurangarira mupfungwa dzako kuti hapana bhangi rimwe rakarurama kune munhu wose. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vachida mabhizimusi evanhu vane ruzivo rwekuwana mari, vamwe vanogona kutarisa "mararamiro ekuchengetedzwa kwezvinhu".
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, kubhengi kwemahombekombe hakurevi kunzvenga mutero kana kuviga zvinhu zvako. Izvo zviri pamusoro pekuvaka bhizinesi rako uye kuchengetedza zvinhu kubva kune vexatious litigation. Ndokunge, vanhu vazhinji vanongotanga maakaundi emhiri kwemhiri kwemakungwa kuti vabatsirwe nemitemo yenyika dzakanakisa.
Nzvimbo Yakachengeteka Kupfuura Inshore
Nekufamba kwenguva, chokwadi, zvinoita sekunge mubvunzo uri kushoma "Ko kubhengi rekunze kwandiri?" Uyezve "Kwakawanda kubhengi kwakanaka kwandiri here?" Izvi hazvisi zvimwe zvinopesana. Iyi ndiyo mhedzisiro yakananga yeiyo shaky banking system. Iyo itsika inotsigirwa nehurumende mune chikwereti; hurumende iri kupisa kuburikidza nemari yevanhu.
Zvichakadaro, iyo federal reservation iri mune shaki. Kana iwe uchifunga zvimwe, zvienzanise nemasangano akaenzana munyika dzisina kudzika muchikwereti. Chokwadi mubvunzo hausisiri wekuti kubhangi rekune dzimwe nyika kwakachengeteka here. Mubvunzo watinofanira kunge tichibvunza uyu. Ndeipi yakachengeteka yekumhiri kwebhangi yatinofanira kushandisa kune yedu pachedu, zvepamutemo, bhizinesi uye kubatsirwa kwemari?
Offshore banking inobvumira kuwedzera zvakavanzika zvemari. Vazhinji vanhu nemakambani pasi rese vanotora mukana wekuchengetedza zvakavanzika izvi. Vagari vemuUS vanogona kunakidzwa nemubayiro mumwe chete wemari sevanhu ava uye mabhizinesi nekubhanga kunobva kumahombekombe.
Kuchengetedza mari yako kubva pakurambana, kumatare uye kurwiwa zviri pamutemo ndicho chimwe chikonzero. Unogona kuvhura akasiya mabhengi account muzita remakambani ari kumhiri kwemakungwa kuti ape kuvanzika kwakanyanya uye kuchengetedzeka. Offshore emabhengi account haangoori evapfumi chete. Kune kusimuka kwakasiyana kwenhamba yevaAmerican vanoisa mari yavo mumaakaunzi emari zvakavanzika. Chinangwa chekunyora uku ndechekupa kunzwisisa uye ruzivo pamusoro penyaya yacho.
Kuvanzika kweAptshore Bank Account
Mazhinji emahofisi ebhengi akachengetedzeka ane mitemo yakavanzika uye mitemo. Aya ari munzvimbo yekubatsira kuti ave nechokwadi chekuti hunhu hwavanochengetera mari pamwe nevanoisa mari pamwe nekutengeserana kwakabatana kuri kwepachivande. Kureva kuti, casual probe kana prying ziso harizokwanise kuongorora mune zvemari nyaya. Kunyange ichi chakavanzika chiri chinyorwa, hazvigone kuvimbisa zvachose kuvanzika uye kusazivikanwa. Masangano ese ezvemari pasi rese ane chinosungirwa zviri pamutemo zvisungo. Nekudaro, ivo vanofanirwa kutaura uye kutevedzera kuferefetwa kwavanofungidzirwa kuti kune mhosva yakakura. Izvi, hongu, zvinosanganisira ugandanga, kubvisirwa mari, kana michero yekutengesa zvisiri pamutemo zvinodhaka.
Nekudaro, muhuwandu hwakawanda hwezviitiko hapana kupomedzera kupomerwa kwemhosva. Saka, depositor ruzivo rwakachengetedzwa mune godo mafashoni. Izvi offshore bank account Matongero akagadzirirwa kuti ape zvakavanzika, uye anoshanda nekuchengetedza nekuchengetedza ruzivo rwemuridzi. Iyi yakakwira mwero wekuchengetedza zvakavanzika inonyanya kukosha sezvo ine chekuita nekuchengetedza pfuma kubva kumatare edzimhosva. Semuenzaniso, nyaya dzeveruzhinji dzakadai sekurambana kana kukwikwidza nzvimbo dzehondo mazuva ese mumatare.
Hazvisi mubhengi kufarira kuburitsa zvakavanzika kana depositor ruzivo. Nekudaro, vane tsika chete vakamboita vasingadi uye pamwe nekumwe kuomesesa miedzo iyo iyo yekumbira hurumende inosangana. Chero kungofanana nekubviswa kana kubhuroka muchivande kwaizobatsira kuputsa kuvimba kwevamwe vangangobata account. Saka nekudaro, vaizomira kuti varasikirwe nemabhizimusi mazhinji ebhengi.
Kunyangwe zvakadzika uye zvakatsiga mazinga ekusazivikanwa uye kuvanzika anowanikwa nyore. Mumwe anogona kukwidziridza kuvanzika kuburikidza neasset-akabata mota dzakadai seInternet Bhizinesi Makambani (IBCs) kana Offshore trasti. Zvishandiso izvi zvinopa makomo ekudzivirira zvichienzaniswa nekungovhura "bank account."
The chinangwa yemunhu chero anotarisa kuti avhure one or more offshore banking account anofanira kunge ari aya. Kurova chiyero chakakodzera pakati pekuchengetedzwa kwefuma, kusazivikanwa, kuchengetedzwa, uye kuwanikwa zvakakosha kuve nenhungamiro. Ive nechokwadi chekutora mubatiri wezano kuti akuwane mhinduro yakafanira iwe.
Yekuwedzera Ruzivo Nezve Offshore Banking
Masheya akakurumbira emakadhi emabhangi ekunze anogona kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Nekudaro, zvakakosha kwazvo kuti vaumbe kambani yekune dzimwe nyika ive yavo account yekubhanga. Masimba anopa zvakavanzika zvakanyanya kune varidzi vekambani yekune dzimwe nyika haasati ari mutongi akafanana neanopa kubhengi account. Mumwe anogona kutyaira mota yeMercedes. Asi iyo mota haizove neMercedes matairi. Ichawedzera kutakura Goodyear, Firestone, Continental yeMichelin matairi.
Saizvozvo, iwe uchazoda kusarudza iyo kutonga pamwe neakanyanya emutemo maturusi. Ipapo iwe uchazoda kusarudza kutonga pamwe neakanakisa emari masangano anozadzisa zvaunoda.
Semuenzaniso, iwe unogona kuve nekambani mune chitsuwa cheNevis uye bhangi muSwitzerland. Mutemo wekambani yeNevis inopa kuvanzika kwepamusoro kweuridzi. Switzerland inopa iyo yakasimba kusanganisa kwebhangi kuchengetedzwa uye zvakavanzika zvemari. Izvo zvakakosha kuti ugadzire iko kusangana kwakaringana kune zvako zvaunoda.
OffshoreCompany.com ndiyo mvumo yepasi rose mukushambadzira masevhisi. Iyo sangano inonyanya kuve nekushambadzira kwemari uye zvirongwa zvekudzivirira kweasiti kune vateereri vepasirese. Iyo kambani yanga iri mariri kubvira 1906. Tinokurudzira chero munhu angave ari mutengi kuti atsvage rubatsiro rwemutyairi akavimbika pamasevhisi masevhisi. Unogona kuita runhare uchishandisa nhamba yefoni kana fomu yekubvunza pane ino peji.
Kuvhura account yeofficial kunopa imwe sarudzo uye yepamutemo sarudzo yekuchengetedza mari yako. Iyi kambani "yanga iripo" kubvira 1906.
Robert Kiyosaki, muzvinabhizimusi ane mukurumbira pasi rose, mudzidzisi wezvemari uye NY Times bestselling munyori akataura izvi. "Kana uchida kuenda kumwe kunhu, zvakanaka kuwana munhu atove aripo." Kana vanhu vakabudirira mune zvemari vanotaura, zvinowanzova zvakanaka kuti uteerere.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, angangoita, mamirioni e2.7 eAmerica vane mari yavo mumaaccount off. Vezvematongerwo enyika vekuAmerica, vapfumi vanochengeta mari uye vekuzivikanwa zvakafanana vanotora mukana offshore banking mikana. Iyi nhamba haibatanidzi iyo 7.6 mamirioni eUS vagari vanogara uye mabhangi kunze kwenyika, maererano neUS State department. Zvakare, zvisina kusanganiswa muuwandu uhu, huwandu hwevanhu vemauto eUS vanogara pasi rese. Izvo hazvina basa kana uri mugari weUS kana anogara kune imwe nyika mhiri kwemakungwa. Chero chikonzero, vanhu vazhinji vanogona kubatsirwa zviri pamutemo nekuva neakaunzi account.
The Financially Unsavvy US
Njodzi yekupedzisira yemari muUS yakaitika mu2008. Pakati peino nguva, mamwe emabhizinesi makuru ekubhangi akaenda kubhuroka. Izvi zvakakonzerwa nemabasa ekunyepedzera akaitwa kuvanhu veAmerica. Yakatumira kuvhunduka kutenderera pasirese. Mabhirioni emadhora mumari yekuchengetedza nemapension zvakarasika. Njodzi yakasiya vanhu vazhinji vatyoka, vachifanirwa kutanga pamusoro. Ndiani angati hazvizoitike zvakare?
Izvi zvisati zvaitika, iyo US stock market yakarova mu 2000. Izvi zvaizivikanwa neimwe se "dot com bubble," sezvaunorangarira. Ipapo pakanga paine zuva iro rakakurumbira musi waOctober 19, 1987. Isu tinodaidza zuva iro kuti "Nhema Muvhuro" uye ndiro rakanyanya kushupika remusi wezuva rezvemari munhoroondo yeAmerica. Izvo zvakakonzera pamusoro pe 500 mabhiriyoni emadhora kupera kubva mumisika. Izvi zvisati zvaitika, dambudziko rakakura kwazvo rezvemari raive Huru Kushungurudzika mu1929. Kuwedzerwa kune izvi kudzoreredzwa kwakawanda pakati pazvino uye izvo zvakapaza mari yemamiriyoni eAmerica.
Uyezve, iU.S. ndiyo inonyanya kuve mune-chikwereti nyika munyika. Sezvo chikwereti pane chikwereti chenyika chichikwira, zvinokonzerwa nematambudziko mazhinji emari muUnited States anoitawo. Izvi zvinosanganisira kuwa kwebhangi ... kuti mari yako inogona kunge iri. Usavimba neDFIC kukubhadharira iwe. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) isangano rehurumende yeUnited States inopa inshurensi mari yekuisa mari kumabhangi eSouth America. Dambudziko rega nderokuti, hongu, rinotsigirwa nevakanyanya mune chikwereti nyika pasi.
Ita Zvakapfuma uye Zvakaziviswa Ita
Izvo zvinozivikanwa zvakanyanya kuti kusiyanisa yako yemari portfolio ndiyo nzira kwayo yekuenda. Kuisa mari yako mumatokisi, mari dzinoenderana, mari yemendenenzi uye zvivakwa zvinongori zvisarudzo zvishoma kune wevhareji investor. Asi kana dzese idzi dura dzirimo muUSA, dzese dzinogona kutorwa dzichibva dzanyura. Muchiitiko chekumwe kudonha kwemari kuUS kunogona kuderera kune chidimbu chekukosha kwavo kwekutanga.
Zvakadini kana pane dzimwe nzira dzekutsvaga?
Ko dai pakanga paine dzimwe nzira dzekudyara, chengetedza uye kusiyanisa chikamu chako chemari? Uyezve, zvakadiniko kana iwe uine bhonasi yakawedzerwa yekuve nekuvanzika kwakanyanya kwekuita kwako mari?
Ikoko ndiko offshore bank accounts vauye.
Kuti uratidze kuti huwandu hwemari yekambani yekodzero yakawanda ndeyekuti, mari inopfuura $ 32 trillion madhora yakaiswa kune dzimwe nyika. Savvy investors vanoziva kuti US haisi uye haasi iyo "enda kune" nzvimbo kuti uwane mari yavo. Chaizvoizvo, kusvika kune mabhengi akachengeteka ane hanya, US inotarisana zvakanyanya pane urongwa hwebhengi rakachengetedzwa zvikuru munyika.
Sezvatataura pamusoro apa, sekureva kwe Global Global runyorwa rwe "World's 50 Safeest Banks 2015," US inosvika #30, #45 uye #50 pane runyorwa rwemabhangi akachengetedzeka pasirese! Iwo mabhangi madiki ekurima, AgriBank, CoBank uye AgFirst ndiwo chete mabhangi eU.S. akaita rondedzero. Mabhangi anoshandiswa nevakawanda vekuUnited States kumari, Chase, Citi uye Bank of America hakuchina pane icho chinyorwa.
Inoita kuti iwe ufunge ...
Kuita zvishoma kudiwa pamari yako kupfuura mwero wegoremo wekufutisa unoipedza. Kutora mikana ine njodzi yekudyara upofu mumusika wemasitoko haisi nzira iyo yaungakwanise kuzadzisa zvinangwa zvako zvemari.
Mikana uri kushanda nesimba zuva nezuva. Iwe unogona kunge uine bhizinesi, ubhadhare mabheti uye ita nenzira ine mari. Mari iyo iwe yaunenge wasara pamusoro uye chengetedza (uye kuyedza kuchengetera ngoni pamusika wekutengesa) ndiro yako yezai. Ndiko kugona kwako, uye kurota kwako kune hupenyu huri nani.
Panguva ipi neipi, magweta ane makaro anogona kusunungura maakaundi ako ebhengi kupa mari yako isingakwanise. Nyaya dzakawanikwa ne IRS, kurambana, kubhadharirwa mari kubhadharo, nyaya dzekutsigira mwana kana chero mutongo wakanangana newe zvinogona kukonzera kubvisirwa maakaundi ako ebhengi kubva pasi pako.
Kunyangwe kuroora uye kurambana kungangodaro kwakaratidza mhedzisiro yemari, kuti vazhinji havachapora kubva. Sei? Nekuti zvese zvako zvaunazvo zvinogona kunge zviri muUS. Saka nekudaro, ivo vanoonekwa uye vanokurirwa kutongwa nekutorwa, zvichikusiya uri murombo mumba.
Kupedza muchato kunorwadza pamoyo, ehe. Asi zvakare zvinoparadza vanhu mune zvemari. Matanho ekurambana anogona kutora makore kuti apedze. Mumwe anogona kupaza makumi ezviuru kana kunyange mamirioni emadhora. Gare gare, inogona kukusiya nechikamu chidimbu cheichi chawakavaka. Kuziva mari nezvechokwadi ichi kunopa chimwezve chikonzero. Ichi chimwe chikonzero chekugovera imwe yemari yako kuaccount account mukati mezvishandiso zvine simba zvemutemo. Ikoko, iwe unogona kuichengetedza kubva munzira inokuvadza.
Kuvhura nhoroondo yekunze kunoita kuti uwane rusununguko rwekuchengeta mari yako yega uye usasvike kune vekugara mumhuri.
Vezvenhau vaiwanzotaura nezve account dzekunze se "nzvimbo dzemitero" kana "nzvimbo dzemitero." Kare, IRS haina kunyatsoongorora mari yavakaisa pamhenderekedzo. Nekuti pane zvakawanda zvakanakisa mari yekudyara mari kunzeshowa. IRS ikozvino yaita kuti zviome kune avo vanotsvaga kutsvaga rubatsiro rwemari-uye IRS inoda chikamu chayo.
Mu2009, iyo congress yakapfuudza iyo yeAccount Account Mutengo Wokubvumirana Mutemo (FATCA). Yakataura, sepakutanga, kuti vagari veku US vanogara kunze kwenyika vanofanirwa kuisa mutero wavo ne IRS. Chakanga chiri chitsva, zvisinei, chaive chekuti masangano emari kunze kwenyika aifanira kuburitsa vatengi vayo veUS avo vange vari kubhengi navo. Nyika yakawana yakawanda nhau panhau iyi yaive Switzerland. Iyo Swiss Bank Account yakanga iine, uye ichine mukurumbira wakanaka. Switzerland inyika yakakura yekudyara kana kuchengetedza mari. Iyo inozivikanwa nekuchengetedza kwebhangi uye yakawanda yakawanda sarudzo yekudyara. Iyi mirairo yakazochinja kuva godend. Izvi zvinodaro nekuti zvakapusa kuti munhu apomere munhu wemuUS mari yekubvisa mutero. Kana iyo bhangi yavanoshandisa ichisungirwa kuti vataure, kubvisirwa mutero kunonyanya kushoma pane imwe nyaya. Nekudaro, zvinoita kuti kuteverwa nevanhu veUS kuve nyore.
Kune dzimwe nyika dzakawanda, kunze kweSwitzerland, kuti uise mari yako.
Ndapota cherechedza kuti yakanyatsotenderwa kubhengi kumahombekombe ekumahombekombe. Vagari vomuUSA vanofanirwa kutaurira purofiti yavo yekumahombekombe kune IRS. Ichi chisiki chiri nyore chekushingairira kwekuita iwe panguva yemutero. Asi cherechedzawo kuti CPAs uye magweta anonzwisisa emhiri kubhengi mitero mitemo inogona kubatsira. Avo vanoziva-tsika nemitemo mitsva iyi uye vanokufamba nenzira yakareruka yekubika.
Kuchengeta mari yako yose mu US banking system nhasi ndiyo nzira isina kumboitika, isina ngozi uye yunifomu yekuisa mari. Sei iwe wakachengetedza pamutsa wekunyengedzera, huori, hutsotsi?
Kuvhura account yeofficial hakuna kuoma. Nekudaro, kune mitemo mitsva uye hoops yekusvetuka kuburikidza, pamwe nehuwandu hwe offshore banks avo vasingagamuchire US, Canadian kana Australia Australia. Nekudaro, zvinokurudzirwa zvakanyanya kutsvaga kambani ino ruzivo nein-ins-uye-yekubuda kwemabhangi ekunze.
Uri kufarira kutsvaga zvimwe here? Kana zvirizvo, isu tiripano kubatsira. Iko kune fomu yekutaurirana pane ino peji iwe yaunogona kuzadzisa izvozvi. Uyezve pane nhamba dzekuti iwe ufone kuti utaure kune munhu ane ruzivo wezano. Inzwa wakasununguka kushandisa mukana uyu uye usvike kwatiri kune rubatsiro.
To chitsauko 2>